Nhau - Chii chiri Upvc Hwindo & Musuwo?
Upvc Hwindo Mashini
Aluminium Window Muchina
Mullion hwokugaya hwakabvira Machine
Aluminium Kodhi Router
Kona Chibatanidza Kucheka Muchina
Kona Crimping Machine
Insulating Girazi Kugadzira Line
Otomatiki Insulating Girazi Kugadzira Line
Insulating Girazi otomatiki Kuisa chisimbiso Robhoti
Horizontal Hollow Glass Kuchenesa Machine
Horizontal Hollow Girazi Hot Press Machine
Butyl bemhapemha Machine
Silicone Extruder Muchina
Otomatiki Bar Bending Machine
Desiccant otomatiki Achifaya Machine
Edge Makorari Machine
Hwindo Door Hardware
Upvc Door Hwindo Pazvibato
Musuo Hwindo Espag
UPVC Door Hwindo Mahwindo
Zvishoma nezvishoma mumatope Door Window Roller
Masuo uye Hwindo Zvishongedzo
Insulating Girazi Zvinhu
Chii chinonzi Upvc Window & Door?
1. Hwindo & Nhoroondo Yemusuwo
Wood zvinhu - Simbi windows windows madhiri - Aluminium windows madhoo - Upvc windows madhoo - themobreak aluminium winodws madhoo.
Kwemakore mazhinji hwindo & zvigadzirwa zvemukova, zvakagadzirwa kubva kumatanda, izvo chete zvinoshanda zvinhu zvenguva.
Dzimba dzekugara dzakakura uye mahwindo mazhinji ekutengesa akagadzirwa nesimbi, asi zvakaipira pahwindo iri raive kushomeka kwekubvisa kwemamiriro ekunze, nekudaro mahwindo aive akanyorovera zvakanyanya.
Mushure meHondo Yenyika II, maaluminium alloys akagadzirwa ekugadzira ndege akaiswa kune hwindo & zvigadzirwa zvemusuwo.
Aluminium yakaburitswa mumaprofayiri akasiyana siyana, ndokuzogadziridzwa kuita mafuremu emawindo uye mabhanhire, ndokuzopenya. Mahwindo ealuminium ekutanga aive asingadhuri, akareruka kuisa uye akasimba, asi iwo aisanyanya kushanda nesimba.
Kugadzira windows windows nzvimbo hombe yefekitori yaidikanwa, nzvimbo yakazadzwa nemasaha ekucheka, michina yekugaya, kona kona crimping muchina, punch michina, mweya compressors uye mweya unoshanda sikuruu pfuti, glazing inonamatira makomponi uye yakasimbisa mimwe michina yekutsigira sematafura-kubuda matafura. , mitsara yegirazi nezvimwe zvakadaro.
Nekufambira mberi kwenguva, Kuvandudzwa kweisina kunyorwa poly vinylchloride (uPVC) yakaendesa indasitiri yehwindo munguva dzazvino.
UPVC inodzingwa, zvakanyanya sealuminium, asi iyo yekuwedzera extrusion haidi hombe, inopisa, inopedza simba extrusion yekudhinda nemovheni kupisa iyo aluminium billet kusvika ku1,100 degrees F.
Panzvimbo iyoyo, pvc yemvura inosvinwa kuburikidza nefa mukati memvura umo inotonhorera uye yakasimbiswa kuita mbiri yewindow, yese munzvimbo iri yakati kurei kupfuura garaji.
Kugadziriswa kwePVC profiles kuita zvinhu zvewindows hazvidi kuwanda kwepunch, michina yekugaya nezvimwe zvinoshandiswa.
Inongoda chete ngowani-saha, kunyanya yakapetwa kaviri musoro wekucheka muchina, uye wekubatana wekutema muchina.
Mune zvese, kushanda nesimba kwakanyanya. Kupenya kunowanzo kuve "yegungwa mhando," iri gasket inochinjika yakaputirwa yakakomberedza girazi yeyuniti micheto, ipapo furemu yebhanhire yakaunganidzwa uye yakasunganidzwa pamwechete kutenderedza iyi unit, ichiumba ino shanda inoshanda, inodonhedza-proof iyo inozoiswa mukati hwindo rehwindo.
Iko kukona kwemakona kwakasungirirwa, kunge furemu rehwindo, iyo glazing iri "kudonhedza-mukati," ichishandisa gasket uye inopinda-mukati mekupenya mabheji kubata iyo yegirazi unit mune iyo sash.
Nekuda kwekureruka kwekugadzira iyo UPVC kugadzira hwindo kunogona kuitwa padanho remuno. Vazhinji vanoisa mawindo vakatanga kugadzira avo windows. Iwo maPVC profiles, hwindo Hardware, girazi uye zvimwe zvinhu zvinopihwa nePVC extruder, pamwe nemahwindo dhizaini uyo anogadzira mvumo yekugadzira.
Zvizhinji zvePVC tekinoroji yakatangwa muEurope, neUK neGerman zvichitungamira kufambisa kuenda kuUpvc windows. MuU.SA, uPVC extruders yakagadzwa uye nekukurumidza yakaendeswa kumberi muindasitiri.
Zvakare pamwe nezvakanaka zvekugadzira, Upvc windows inopa dhizaini kuchinjika, runako, kugadzikana, simba, mamiriro ekunze kushora, kuramba mhepo, termite-proof, ngura uye kupisa moto. Zvakare, ivo vanoderedza kutamisirwa kwezwi uye vanogadziriswazve uye zvine mutsindo. Vanoda kushomeka kana kusatombogadziriswa, kunze kwekuchenesa uye zvakaringana semakumi matatu muzana zvakanyanya kushanda huni kana aluminium.
2. Upvc Hwindo Window Main Zvinhu
Kazhinji kutaura, kwekugadzira hwindo kana kugadzira musuwo, kune zvinhu zvikuru zvitatu:
2.1 Machina: yekucheka, kutenderera, kuchera kana kukuya upvc mbiri.
Yese michina inodiwa yakasungirirwa zvinoenderana neinotevera, Fabricator inoda kusarudza zvinoenderana nezano ravo (kuburitsa fekitori, budge, saizi yefekitori etc.)
Kucheka michina (upvc & aluminium)
Welding muchina (upvc)
Glazing bead kucheka muchina (upvc)
V notch muchina (upvc)
Mullion kucheka muchina (upvc)
Mullion azvikuya muchina (upvc & aruminiyamu)
Kona crimping muchina (aluminium)
Water slots azvikuya muchina (upvc)
Kopa router muchina (upvc & aluminium)
Kuchenesa muchina wemakona (upvc)
Arch vakafugama muchina (upvc)
Nhoroondo musuwo) nezvimwewo Fabricator achatenga zvinhu zvinoenderana nezvaanoda.
2.3 Hardware: chikamu chekubatanidza & kukiya furemu uye bhandi.
Fabricator inoda kusarudza Hardware zvinoenderana newindo remusuwo hwindo uye saizi.
3. Hwindo & musuo mhando
3.1 Hwindo mhando
zvishoma nezvishoma mumatope hwindo
tenderera & shandura hwindo
3.2 Hwindow mhando yekudhirowa
Tilt & tendeuka
Inward casement (kaviri bhandi)
Zvishoma nezvishoma mumatope
3.3 Rudzi rwemusuwo
Post nguva: Jun-03-2021
Yakachengeteka kugadzirwa kwemaitiro ePVC masuo uye ...
1.Dhoo uye hwindo dhizaini dhizaina Chekutanga pane zvese, ndapota nyatso tarisa maitiro maitiro, sarudza mhando uye huwandu hwamahwindo anodikanwa zvinoenderana neyako dhizaini dhizaini ...
Maitiro ekuronga fekitori marongerwo?
Isu hatisi chete kutengesa michina kumutengi, asi zvakare incluges mukupa vatengi vedu nemazvo & mutengo unoshanda mhinduro, dzinobatsira mune yanhasi maindustri ...
Chii chinonzi Upvc Window & Door? 1. Hwindo & Door Nhoroondo Wood huni - Simbi windows madhoo - Aluminium windows madhoo - Upvc windows madhoo - themobreak aluminium wino ...
Mashandisiro ekushandisa CNC kona yekuchenesa muchina?
PARAMETER INPUT VOLTAGE 380V / 50HZ INPUT POWER 1.5KW KUZVIDZIRA CUTTER ROTATE SPEED 2800r / MIN Mhepo KUSVIRA 0.4 ~ 0.7MPa PROFILE HEIGHT 20 ~ 150MM PROFILE WIDT ...
Kero: Risesun Times Square, nhamba 9, Beiyuan Street, Licheng District, Jinan City, Shandong, China.